Mana barumsa elementary Morningside kan Sioux City keessati argamu keessati nama Covid-19 qabame
Published August 13, 2020 at 10:58 PM CDT
Mana barumsa elementary Morningside kan Sioux City keessati argamu keessati nama Covid-19 qabame argamuun himame.
Dubbataan hawaasa mana barumsa Sioux City akka jedheti walitti dhufeenya warra qaban manna fayyaa Siouxland wajjiin hojachu jira. namni dhukkuba Kanaan qabame fi namni nama Kanaan walitti dhufeenya qabu yeroo dhaf adda baafame taa’u jira. Barumsi bona aana hunda keessati bor xumurama, Morningside STEM elementary keessati namni walitti dhufeenya nama saniin hin qabne kan itti fufu ta’a.
Sagantaan mana barumsi daa’imani qamaan barataan September 2ffa kan jalqaban ta’u. ijoole umriin isaani 3 fi 4 ta’an guyyaa guutu maski kan uffatan yoo ta’u, garuu wayta alaa bahanii, wayta waanyaatani fi boqonnaa jaraa hin godhatani.
Durabu’aan Community Action Agency kan Siouxland akka jedheti barattoota samuu cimaa akka ta’an gochuuf daree keessati barsiisoni barsiisu akka qaban dubate. Community Action Agency olmaa daa’imani 29 hojjate fi daree olmaada’imani kan Sioux City keessati mara hundaratti. Sababa Covid-19 kan cufame qixxee march keessati itti deebi’anii jiru. Manni barumsaa garii bona keessa ijoole Kindergtan qarqaaruf banamee ture.waggaa tarte keessa, barattooni 425 barumsa olmaa daa’imani fudhatanii jiru. Waggaa kana, lakkoofsi gara 350 gan xiqqaate jira.
Namni dhukuba Covid-19 dabalataan Iowa keessati du’uun gabaafame, akkasumas waliiglatti kan qabame 50,000 gaheera. Website state guyyaa kaleesati as ganama kana namni 7 du’uu gabaasere, kunis du’a waliigala state keessati gara 954 olguddisa. Saafaya irrati namni 5 dabalamuunis himame jira.
Websiting akka mullisutti kaleessa as ganama kana namni harawa qabame 600 ta’uu ibse, kunis state keessati waliigalatti kan qabame 50,200 olsiise. guyyaa har’a Woodbury County keessati namni Corona virus qabame 16 ta’uu himan, waliigalatti kan qabame ammo 3,760 yoo ta’u; waliiglatti kan du’emmoo 52 dha. Dakota County Nebraska keessati namni haarawa qabame 2 dha.
Local NewsLocalIowaNebraskaSTEMSouth DakotanewsCOVID-19OromoHead Start
Sararri bakakkaa guyyaa wiyxata ganama bubbee guddaa, baradoo fi rooba muraasa eastern Nebraska fi Iowa keessati kan argame mukkeen jiysuuf fi human ibsaa…
Governor Iowa Kim Reynolds ajaja haarawa baastetti sababa balaa qilleensa Iowa keessati argame saniif fi kaleessa Iowa keessati rakkina guddaa geesite.…
Namni dabalataa baayen sababa Covid-19 kutaa Iowa keessati du’uun himame, namni lamaa Plymouth County keessa jiran dabalate.waliigalatti Iowa keessati…